कविता : यो अश्लील सत्ता कसको हो ?- दसैं विशेष - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ६, २०७७ यादव देवकोटा
काठमाडौँ — हिजो,
दुई तल्ले माटे घर
ट्याङ्कामा केही हजार रकम
केही मुरी धान फल्ने खेत र पाखोबारी
गाउँमा त्यत्ति भएको मानिसलाई सामन्त भन्नेहरु को थिए ?
सामन्त भन्दै तिनको टाउको गिँड्नेहरु को थिए ?
सबैभन्दा आलिसान महल
सबैभन्दा महँगो जीवनशैली
एकसाथ आधा दर्जन गाडीको ताँती
विदेशी अस्पतालमा उपचार
विदेशी रिसोर्टमा ऐस–आराम
सहरमा यो सब व्यवस्था जुगाड गरिसकेकाहरु को–को हुन् ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
मजदुर, किसान, हरितन्नमहरुको अधिकार भन्दै
सपना बेच्नेहरु को थिए ?
युगीन संकटको दिनमा
सत्ता भनेको फगत लास गन्ने
संवेदनाहीन मेसिनमात्रै हो भन्नेहरु को–को हुन् ?
हातमै नाम्लो च्यापेर
सडकपेटीमा मरिरहँदा सूर्यबहादुरहरु
देशमा कोही भोकै मर्दैन भन्दै
अश्लील गफ बेच्ने सत्ता कसको हो ?
उपचारको रकम तिर्न नसकेर नागरिकहरु
अस्पतालबाट आफन्तको शव बुझ्न सक्दैनन् !
गोजीमा केही हजार चुनदाम नहुँदा
खसेको पाठेघर च्यापेर क्यान्सर उमारिरहँदा आमाहरु
महामारीको दिनमा किनिएको स्वास्थ्य सामाग्रीमा
कमिसनको हिसाब जोडिरहेको सत्ता कसको हो ?
कलिला नानी ढाडमा बाँधेर
खाली खुट्टा हप्ता दिन लामो बाटो हिँडेका
आमाहरु कहाँका हुन् ?
पेटको भोकको राँको खप्न नसकेर
एक प्लेट भातको लागि
खुलामञ्चमा ओइरिएका नागरिक कहाँका हुन् ?
यी निरीह भोका पेटहरुलाई
समृद्धिको ठट्टा सुनाउने शासक कसको हो ?
सत्तामा सवार यो निर्लज्जतालाई
खसाउन अश्लीलताको घोडाबाट
‘पाखुरी’को खिया टक्टक्याउने कहिले हो ?
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ १७:५८
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन देशका लागि राजदूत नियुक्त गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ समितिको अनमोदनपछि राष्ट्रपति भण्डारीले जर्मनी, बेल्जियम र पाकिस्तानका लागि राजदूत नियुक्त गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जर्मनीका लागि रामकाजी खड्का, बेल्जियमका लागि गेहेन्द्र राजभण्डारी र पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारिलाई राजदूतमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
घिमिरेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा २८२ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बेल्जियम अधिराज्यका लागि गेहेन्द्र राजभण्डारी, इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र संघीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्कालाई आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।'
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ १७:५४